Olona manankarena 10 ambony indrindra any Kenya 2022 - Victor Mochere
Tsy mitsaha-mitombo ny isan'ny mpanankarena indrindra any Kenya. Ireo vondron'olona ireo dia manana harena, fanjakana ary fampiasam-bola miteraka vola ary portfolio izay mihoatra ny hafa any amin'ny faritra sy any ivelany. Ireo miliaridera sy centi-millionaires ao Kenya dia nanangana fanjakana miliara sy an-tapitrisa dolara amin'ny indostria isan-karazany toy ny fambolena, ny sakafo, ny fanorenana, ny angovo ary ny fitsinjarana, ary nahazo vola an-tapitrisa dolara ho an'ny boot.
Ireto ny olona 10 manankarena indrindra any Kenya.
$ 1.95 lavitrisa
$ 1.7 lavitrisa
$ 1 lavitrisa
$ 950 tapitrisa
$ 900 tapitrisa
$ 700 tapitrisa
$ 680 tapitrisa
$ 470 tapitrisa
$ 450 tapitrisa
$ 300 tapitrisa
Tags: ny fandraharahana